आफ्नै मान्छेबाट डराउनुपर्ने कस्तो असुरक्षित समय हो यो ? – Complete Nepali News Portal
आफ्नै मान्छेबाट डराउनुपर्ने कस्तो असुरक्षित समय हो यो ?
April 3, 2017	920 Views
आफूले जन्माएकी छोरीले आफ्नै हत्याको योजना बुन्लिन् भन्ने माइला महर्जनले सायदै सोचेका थिए । तर, विडम्बना, उनकी छोरी संगीताले अंशबण्डाका लागि आफ्नो श्रीमान्सँग मिलेर आफ्नै बाबुको हत्या गराइन् । काठमाडौँ, टोखाकी संगीता (२०) ले नुवाकोटका सन्तोष पाण्डेसँग अन्तरजातीय विवाह गरेपछि परिवारसँग उनको खासै राम्रो सम्बन्ध थिएन । त्यही भएर संगीताले माइतीपट्टिबाट आफ्नो भागमा पर्ने अंश (करिब छ आना जमिन) लिन खोजेपछि बुबा र दाइसँग उनको विवाद सुरु भयो । त्यसपछि संगीताले अंश आफ्नो मुठीमा पार्नकै लागि बुबा र दाइलाई मार्ने योजना बुनिन् ।काठमाडौँ, बानियाँटार बस्दै आएका धादिङका विक्रम तामाङसँग २० लाख रुपैयाँमा उनले ‘मर्डरको डिल’ पक्का गरिन् । मार्ने योजना पनि बुनियो । घर नजिककै मन्दिरमा मार्ने योजना थियो । बुबालाई कुरिरहेका हत्याराहरूले अर्कै मान्छे देखेपछि त्यो दिन त्यत्तिकै बित्यो । दोस्रो दिन पुनः संगीताले मिस्त्री काम गर्दै आएका आफ्ना बुबालाई ‘ठेक्कापट्टाको काम आएको छ’ भन्दै घरनजिकैको खोलाको चौरमा बोलाइन् । त्यसपछि विक्रमको नेतृत्वमा रहेको पाँचजना युवाको समूहले ४३ वर्षीय माइलाको हत्या ग¥यो । ‘संगीताको योजना बुबा र दाइ दुवैलाई मार्ने रहेछ,’ डीएसपी दीपक रेग्मीले भने, ‘तर, माइलालाई मार्नेबित्तिकै समूहका दुई जना अत्तालिएर फरार भएछन् । त्यसपछि दाइलाई मार्ने संगीताको योजना विफल भयो । हत्यामा संलग्न सबैजना हाल कारागारमा सजाय काटिरहेका छन् ।